Gadaa Addunyaa bara 2017 suuraadhaan - BBC News Afaan Oromoo
Gadaa Addunyaa bara 2017 suuraadhaan
Suuraawwan filatamoo guutummaa Addunyaa fi waa'ee Addunyaa ibsan.
Goodayyaa suuraa Haati kun mucaasaanii balaa sigiga lafaatiin dhabaniif gaddaa jiru. Balaa Seraa Liyoon mudate kanaan du'uunsaanii kan beekame namoota 400, kan mana malee hafanimmo 3,000 jedhu qondaaltonni. Kun kan ta'emmoo Hagayya 16, bara 2017.
Image copyright Daniel Irungu/EPA
Goodayyaa suuraa Amajjii darbe, shamarran qomee fi kofoo shubbisaaf mijatu kaawwatanii carraa barnootaa dhaabbati Spurgeons Academy,daa'imman yatiima Keenyaa Naaroobii naannawa Kibeeraa jiraatan 425f mijeessetti fayyadamuuf wayita qophaa'an.
Goodayyaa suuraa Beejiingi keessatti wayita Kongireesiin Biyyaalessaa 19ffaan Paartii Kommunitii Chaayinaa eenyu biyyatti akka bulchuu fi kallattii fuulduraa kaa'an. Pirezidaanti Shi Jiinpiingi hanga Kongiresa itti aanuutti hoogganaa paartichaa ta'anii itti fufan.
Goodayyaa suuraa Suuraan keekii pirezidaantii Zimbaabwee duraanii Rooberti Mugaabeef qophaaye danaa fi waggaasaanii 93 kan ofirraa qabu waahillan isaaniitiin waggaa 93 ffaa guyyaa dhalootasaanii yaadachuuf Guraandhala 21 bara 2017 Zimbaabwee magaalaa Harareetti dhiyaateef.
Goodayyaa suuraa Dubartii yeroo jalqabaaf hijaaba uffachaa moodelistii ta'uuf walii galte, lammummaa Somaaliyaa fi Ameerkaa kan qabdu Haliimaa Aden uffata ittiin dorgomte uffattee Ji'a Guraandhalaa keessa Italii magaalaa Miilaanitti argamte.
Goodayyaa suuraa Hordoftoonni Amantaa Ortodoksii Lixa Laga Jordaan Iddoo Cuuphaa Qasr El-Yahud jedhamutti Ayyaana Cuuphaarratti wayita cuuphaman. Haalli imala naannawa kanaa rakkisaa waan ta'eef haala mijeessuuf jecha aanga'oonni Izraa'eelii fi Paalastaayin akkasumsa qaamoleee amantaa Ordoksiirraa babba'an torba waliin walii galteen mallattaa'eera.
Goodayyaa suuraa Caamsaa 13,2017 gulufsiisaan ispoortii mootoraa haala malaalchisaa ta'een mootorasaa qabatee utaaluun qalbii do'attoota waggaa 50ffaa hundeeffama magaalaa Leegoos Naayijeeriyaatti kabajame irratti argamanii booji'eera.
Image copyright Mercy Juma/BBC
Goodayyaa suuraa Warri Keenyaa fiigicha daakuu halluu walitti darbachuun fiigamu kan warra Hindu Holi irraa ergifatan yeroo jalqabaaf fiiganiiru.
Goodayyaa suuraa Kandy Freeman mormii dhimmi jireenya gurraachotaa nu galcha kan afaan Ingiliitiin Black Lives Matter jedhurratti fuuldura gamoo Obbo Tiraampi New Yorkitti gaggeeffamerratti hirmaatte. Mormiin kun kan inni ka'e wayita poolisoonni Ameerkaa gurraacha Afriikaa tokko ajjeesedha.
Goodayyaa suuraa Afriikaa Kibbaa magaalaa Cape Town keessatti namichi suuraa kaasu danbalii galaanaa jalaa lubbuu tufatee ba'e, namichi utuma suuraa kaasuuf jedhuu danbaliin garagalee itti dhufe.
Goodayyaa suuraa Barattoonni babbareedoon wayita Masaraa Biyyaalessaa Ivory Coast daawwatan , shamarreen kun teessoo Pirezidaantii Itti Aanaa biyyattii biratti suuraanshee ka'e, magaalaa daldalaa biyyattii kan taate Abijaan keessatti ture.
Goodayyaa suuraa Gaarri Italii Etnaan, gaara dheeraa Awurooppaa ,volkaanoo si'ataadhaan beekamuudha. Wayita keessaa dhowee bahu laavaa gara samiitti ol darbatee Oddoola Siisilii keessatti Guraandhala darbe mul'ate.
Goodayyaa suuraa Ji'uma walfakkaatu keessa Shaampiyoonaa Addunyaa IAAF irratti wayita atileetiin Afriikaa Kibbaa Luvo Manyonga qalbii do'attootaa booji'u.
Goodayyaa suuraa Fulbaana darbe, bulchaan Kooriyaa kaabaa Kim Joongi Uun misaa'ela fageenya dheeraa furguggifamu Hwasong-12 jedhamu gara hawaatti erganii daawwatan.
Goodayyaa suuraa Waardiyyaan biyya Naayijeeriyaa Masaraa Kaanoo keessatti wayita Imaama dura dhaabbatu, guyyaa lammaffaa ayaana Iidii Arafaa feestivaala Durbar jedhamurratti gaafa Fulbaana 2,2017.
Goodayyaa suuraa Namtichi daa'ima baatee mooraa US fi Meeksikoo daangessu dcinaa dhaabbata.
Goodayyaa suuraa Namoonni wayita biqilaa haroo Xaanaa balleessaa ture keessaa qulqulleessan, weerarri biqilaa kanaa warra qurxummii misoomsaniif yaaddoo guddaadha.
Goodayyaa suuraa Guyyuma kana wayita dhaabbati daldalaa Fairtrade Foundation warqii Yugaandaadhaa baayyinaan fudhachuuf labsetti namooni kunneen worqee bifa saantimaan jiru barbaadaa turan.
Goodayyaa suuraa Dargaggeessa Keenyaa fiixee mukaa fuuldura Mana Murtii Olaanaa biyyattiitti argamu irra ba'uun ija namaa hawwate. Iddoon kun bakka Abbaan Seeraa Olaanaan Keenyaa David Maraga Filannoon Pirezidaantummaa Hagayya keessa filatame, waliin dhahameera yaada jedhu deggeruun itti haqaniidha.
Goodayyaa suuraa Ijoolleen Morookoo rooba kadhachuuf gara Mazgiida guddicha Salekan Morookoo Raabaatitti argamu wayita deemaa jiranitti suura fudhatame. gaafa sadaasa 24,2017.
Goodayyaa suuraa Aangoo gadhiisuusaanii mirkaneessuun dura ji'a Sadaasaa keessa Rooberti Mugaabeen haadha warraasaanii itti aantuusaanii gochuuf wayita murteessanitti qeeqa cimaa isaan mudateen hanga salphinaan aangoo gadi dhiisuu ga'an.